Mahesh Dahal - Jhilko
सिरहामा ९ बर्षिय बालक डुबेर मृत्यु
कर्जन्हा नगरपालिका–४ भुल्के बस्ने शम्भु बि।क।को घरमा बस्दै आएका उनकै भान्जा अन्दाजी ९ बर्षिय बीरन बि.क. खाल्टोमा जमेको पानीमा डुबेर आइतबार दिउँसो मृत्यु भएको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका-१७ बलौनीबाट अटोमेटिक पेस्तोल १ थान, म्यागजिन ३ थान, गोली ५ राउण्ड र चक्कु १ थान सहित महोत्तरी लोहरपट्टी नगरपालिका-८ भम्रपुरा बस्ने डि.के.भन्ने २० वर्षीय अजिजुल राईनलाई आइतबार दिउँसो...
बलिउडका चर्चित संगीतकार बाजिद खानको निधन भएको छ । वाजिदको सोमबार मध्यरातमा निधन भएको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन् ।
बयोधा अस्पताल ब्यवस्थापनले अस्पतालमा कार्यरत करिब २५० डाक्टर, नर्स लगायतका कर्मचारीलाई बिगत दुई महिनादेखि आधा मात्रै तलव दिएको खुलासा
क्वारेन्टिनमा बस्नेलाई पीसीआर परीक्षण गर्न अन्तरिम आदेश
‘सामाजिक दूरीको मान्यतालाई कायम राखी गर्मीको मौसम भएकाले लामखुट्टेलगायतबाट हुनसक्ने सङ्क्रमणबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न एवं क्वारेन्टिनको अवधिभर क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था...
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाँकेको ठुरिया जंगलमा रोकिराखेको बा ४ ख ९०६४ नम्बरको ट्रकमा ठोक्किँदा आइतबार राती सवा १२ बजे हाइस दुर्घटनामा परेको हो।मृतक १२ जनाकै शव भेरी अस्पतालमा रहेको छ।
शनिवार डिजिटल संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सरकारलाई साइबर डिफेन्सको लागि तयार रहन सुझाव दिएका छन् ।
जब तर्कले जित्न सक्दैनन् अनि ओय दमाई, कामी, गाईने, सार्की बढि बोल्छस् ? आफ्नो औकातमा बस बुझिस्, म त काजी, बाबु साहेब, यो खानदानको, उ खानदानको भन्दै ठुला ठुला कुरा गर्न थाल्छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा आइतबार थप १६६ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएसँगै संक्रमितिको संख्या १५ सय ६७ पुगेको छ भने कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या ८ जना पुगेको छ ।
संक्रमित आमा पनि सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। बुवाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ। मृतक बालिकासहित आमाबुबालाई जेठ १५ गते आइसोलेसनमा राखिएको थियो।
‘यो त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, हिजोको परम्परागत संसदीय व्यवस्था पनि होइन । संसारको नयाँ शासकीय मोडल हो । कार्यान्वयनमा जाँदा हिजोको परम्परागत छ । राम्रो सुझाव प्रतिपक्षबाट आएपनि र सत्तापक्षबाट आएपनि...